यिनै हुन् पोर्चुगलमा २१ बर्षे युवाको हत्या गर्ने दुई युवती , जसले ५ दिन लगाएर शरीर टुक्रा टुक्रा गरी फ्याके ! - VOICE OF NEPAL
यिनै हुन् पोर्चुगलमा २१ बर्षे युवाको हत्या गर्ने दुई युवती , जसले ५ दिन लगाएर शरीर टुक्रा टुक्रा गरी फ्याके !
२३ चैत्र २०७६, आईतवार २३:३१
8293 ??? ???????
पोर्चुगलमा हत्या गरेर शरीरको टुक्रा टुक्रा गरी फालिएका २१ बर्षे युवालाई उनकै २ जना महिला साथीहरुले हत्या गरेको सहस्य खुलेको छ।
हत्या गरिएका डियागोलाई उनका महिला साथीहरुले पैसाको लागि उनकै घरमा हत्या गरेका थिए। डियागोलाई उनकै घरमा पुगेका १९ बर्षीय मारिया मल्वेइरा र २१ बर्षीय मरिअना फोंसेचा नामक दुईजना केटी साथीहरुले सेक्सी नाँच नाच्न लगाएर उनलाई बाधेर हत्या गरेका थिए। निस्सासिएर डियागोको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।
डियागोको मृत्युपछि उनको हातको औला काटेर डियागोको मोबाइलमा लक् भएको फिंगर कोड प्रयोग गरेर उनको मॊबाइल बैंकिंङ् प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि डियागोको शवलाई लुकाउन उनीहरुले पाँच दिन लगाएर मृत शरीरलाई टुक्रा टुक्रा गरेर फालेका थिए, सिएमले लेखेको छ।
पोर्चुगलको अल्गार्भमा पोर्च सितारा भिला भिटा रिसोर्टमा काम गर्ने उनी मार्च १८ तारिखबाट हराएका थिए। सम्पर्कबिहीन भएका ति युवाको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा प्रहरीले फेला परेको हो । उनको टाउको, हात, खुट्टा, र शरीर अल्गार्भकै अलग अलग ठाउमा भेटिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार मृतकको टाउको ताभिराको प्रसिद्ध क्षेत्र पेगो दि इन्फेर्नोमा भेटिएको छ भने हात र खुट्टा बिनाको टुक्रा टुक्रा भएको उनको शरीर १५० किलोमीटर टाढा साग्रेसको चट्टानी भिरमा कालो प्लास्टिकको झोलामा फ्याकिएको भेटिएको हो । प्रहरीले मृतकको टुक्रा पारिएको हात र खुट्टा अझ भेटाएको छैन।
मृतक डियागो गोन काल्वेस आइटी टेक्निसियन थिए। एक पुलिस स्रोतका अनुसार, ती केटीहरू मध्ये एक डिओगोको साथी थिई “र उसलाई थाहा थियो कि उसले ठूलो मात्रामा पैसा पाएको छ”।
दुवैले डियागोबाट पैसा लिन प्रयास गरे र त्यहाँ झगडा भयो। झगडामा डियागोको मृत्यु भयो। त्यसपछि यो घटना लुकाउन दुवै युवतीले डियागोको शरीरलाई टुक्राटुक्रा गरेर विभिन्न ठाउँमा फ्याकेका थिए ।
दुवै प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।